Enwere ike ị nweta backlinks site na ebe nrụọrụ weebụ PR10?
O nwere ike ịbụ na ọ dị oke mma ka ị bụrụ eziokwu. Otú ọ dị, ihe niile dị adị n'ezie ma ọ bụrụ na i nwere nsogbu nke nsogbu ahụ. Ọ dị mkpa ka ị mara na e nwere ọtụtụ ohere iji nwetaghachi backlinks PR 10 kwa ụbọchị. Ihe niile ị chọrọ bụ ka anya gị na ntị gị na-anọgide na-achọ maka ohere ụlọ njikọ ọhụrụ. Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ịnwale nhazi usoro njikọ dị irè karị karịa ịde blọgụ ndị ọbịa ma ọ bụ ikwu njikọ iji nweta njikọta inbound PR dị elu.
Ka anyị tụlee ụzọ ndị nwere ike isi nwetaghachi backlinks PR10. Ụfọdụ webmasters na-eche na ọ bụ naanị ụzọ isi nweta njikọ dị mma dị elu bụ iji mepụta ọdịnaya dị oke egwu. Ọ bụrụ na ọdịnaya gị bara uru, ị ga-enweta ngwaahịa dị mma na njikọ ndị ọzọ. Otú ọ dị, ọ dị anya site n'eziokwu. Ọ ga-arụ ọrụ na njedebe, ma onye ahụ nwere ogologo oge ichere. Ụzọ ọzọ a na-emekarị iji wuoghachilinklinks PR10 bụ ịmepụta ihe dị ukwuu na ime mkpọsa mgbasa ozi na niche ahịa gị na-arịọ ndị nwe ụlọ na ndị na-ede blọgụ iji jikọọ gị.
Otú ọ dị, abụọ ndị a jikọtara atụmatụ ụlọ ọrụ adịghị arụ ọrụ n'eziokwu. Nke mbụ, ọ dịghị mfe ịmepụta ihe dị oke egwu na-enye ndị ọrụ ihe ọmụma ha na-anụtụbeghị. Ọ na-ewe oge na mgbalị iji rụọ ọrụ dị otú ahụ dị mma. Nsogbu ọzọ bụ mgbe ejirighị ọdịnaya gị jikọọ. N'okwu a, ịnwere ike ịtụkwasị anya na ebe nrụọrụ weebụ ma ọ bụ dị ala. Nchọpụtaghị arụ ọrụ na ọnọdụ ndị ahụ. Ọzọkwa, echere influencers enweta ọtụtụ arịrịọ maka njikọ ụlọ njikọ kwa ụbọchị. N'ọtụtụ ọnọdụ, naanị ha na-ajụ arịrịọ gị ọbụghị na-agụ ọdịnaya gị.
Ngwọta zuru okè na, site n'ụzọ, ndụ m credo, bụ ime ihe niile site na onwe gị n'enweghị ịdabere na ndị ọzọ. Ka anyị lebakwuo anya n'otú o si arụ ọrụ.
Mepụta azụlinks gị
Ọ nwere ike ịda mbà, ma ị nwere ike ịmepụta aka gị na backlinks ndị ọzọ dị na PR.Dị ka ọmụmaatụ, enwere m mmasị na ebe nrụọrụ weebụ PR dị otú ahụ dị ka Google, Reddit, Facebook, LinkedIn, YouTube, na ndị ọzọ. Ebe ndị a ga-enye gị ohere ịmepụta onwe gị dị elu, dị mma backlinks na melite gị na saịtị n'usoro. Ịnweghị ike itinye njikọ gị na ntanetị weebụ a ma ama. Ịkwesịrị ịmepụta ezigbo, elu-àgwà, na ọnụnọ dị mkpa na otu n'ime saịtị ndị a wee hapụzie gị backlinks n'ebe ahụ. Ịkwesịrị ịmepụta ezigbo profaịlụ ma jupụta na ozi kachasị mkpa. Ọrụ mbụ gị bụ iji nweta ọtụtụ ọdịnaya nke dị mkpa maka njikọ gị. Site na ime nke a, ị ga-eme ka njikọ gị dị ike na ihe gbasara ya.
Na nhazi ọzọ, ị ga-emerịrị njikọ n'etiti ebe nrụọrụ weebụ niile ebe ebe gị dị. Dị ka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-ebipụta ọkwa ọhụrụ na Facebook, ị ga-ejikọ ya na LinkedIn, Instagram, Pinterest, Twitter, na akaụntụ ndị ọzọ. Na osote uzo, nke mere na akwukwo nile nwere backlinks. N'ihi ya, ị ga-enweta ezigbo backlinks PR 10 site na mgbalị gị n'emeghị ka ọ bụrụ otu narị Source .